खाली पेटमा दूधमा तुलसीको पात मिलाएर खाएमा फाइदा, तर तुलसीको पात चपाउनुहुँदैन - जान्नुहोस् के गर्ने के नगर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
अहिले मौसम परिवर्तनको समय छ। प्राय धेरै मानिसलाई रुघा लाग्‍ने र ज्वरो आउने गरेको हुन्छ । तर हामी मेडिकलबाट तुरुन्तै औषधि किन्छौ र सेवन गर्न थाल्छौ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा ठूलै असर पार्न सक्छ।त्यसो गर्नुभन्दा बरु घरेलु उपाय अपनाउनु भयो भने तपाईको शरीर पनि सधै स्वस्थ र दीर्घायू हुने गर्दछ ।
साइड इफेक्ट पनि नहुने र सधै रोगप्रति लड्‍ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्न सक्छ । यसको लगि तपाईले तुलसीको पात दूधमा मिलाएर खाँदा अचुक औषधि हुन जान्छ । तुलसी एउटा यस्तो हर्ब हो जसले काढा बनाएर सेवन गरेमा टाउको दुख्‍ने, रुघाखोकी चाडै निको हुन्छ । तर यदि यसलाई दूधमा मिलाएर पिउनु भएमा धेरै बिरामीबाट छुटकारा दिलाउँछ ।
तुलसीमा धेरै एन्टीबायोटिक तथा एन्टीअक्‍सीडेन्ट गुण रहेको हुन्छ । यसलाई दूधमा मिलाएमा धेरै पोषक तत्व पाउने गर्दछ । यसलेम मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुद बनाउने गर्दछ।यसबाट मानिस जस्तोसुकै बिरामीबाट बच्न सक्छ ।
अहिलेको समय मानिसलाई कुनै न कुनै प्रकारको तनाव भइरहेकै हुन्छ। कति मानसहरु त तनावले नै गर्दा आत्महत्या समेत गर्ने गरकेा छन् । यस अवस्थामा तुलसीको पातलाई दूधमा मिलाएर खाएमा डिप्रेशन कम गराई आराम दिलाउँछ । छिमेकमा कसैलाई धेरै तनाव भएमा दूधमा तुलसी मिलाएर खान दिनुस सबै निको हुन्छ । किनकी तुसीले डिप्रेशनको हर्मोनहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ । यही कारण ताईको दुखेको टाउको पनि निको हुन्छ ।
अस्वस्थ लगमयतका समस्या
यसको सेवन निमित खाली पेटमा गर्नाले अस्थमा लगायतका रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ । तुलसी र दूधको एन्टी-बैक्टीरियल गुणको कारण तपाईलाई समस्या हुन दिँदैन । यसले सास लगायतका समस्याबाट पनि मुक्ति दिन्छ ।
किडनीको स्टोन हुनबाट जोगाउँछ
यदि तपाईलाई किड्नीमा पत्थरी छ भने सधै तुलसी र दूध मिलाएर खाली पेटमा खानुस् । केही दिनमै पत्थरी गल्दै जान्छ र पछि दिशामा देखा पर्छ ।
फ्लू लगायत रोगमा अचुक
फ्लू लगायतको रोगमा तुलसीको सेवनले एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी तत्वले फ्लू लगायत रोगलाई टाढा धपाउने गर्दछ । यसबाट तपाईलाई फ्लूले छुन सक्दैन् ।
मुटुलाई स्वस्थ राख्‍न
यदि घरको कसैलाई मुटुसम्बन्धी रोग लागेको छ वा ग्रसित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रत्येक दिन खाली पेटमा दूध र तुलसीको पात सेवन गर्न लगाउनुहोस । यसपछि उहाँको मुटु सम्बन्धी रोग धेरै हदसम्म निको हुन्छ ।
तुलसीमा रहेको ए‍न्टी-बैक्‍टीरियल तथा एंटीबायोटिक गुणका कारण कुनै पनि प्रकारको रुघाखोकीले छुन सक्दैन । आयुर्वेदमा रुघा लागेको मानिसलाई तुलसीको पातलाई औषधि बनाएर खान दिनू भन्न‍े सुझाव दिइएको छ ।
रुघाखोकी भएमा आधा लिटर पानीमा केही तुलसीको पात, अलैंचीको धुलो मिलाएर उमाली पिएमा रुघा च्वाटै हुने बताइएको छ । यस्तै बाँकी रहेको छोकडामा दूध र चीनी मिलाएर सेवन गरेमा धेरै फाइदा हुनेछ ।
पवित्र मानिने तुलसीको पात चपाउनुहुँदैन, अन्य के-के काम गर्नुहुँदैन जान्नुहोस् :
हिन्दु धर्ममा पवित्र मानिने अनेकौँ वस्तुहरूमध्ये तुलसीलाई सबैभन्दा पवित्र वृक्षको रूपमा लिइन्छ। साथै तुलसी त्रीमूर्तीदेव विष्णु भगवानको अवतार भएको पनि विष्णु पुराण र श्रीस्वस्थानीमा उल्लेखित छ।
‘जुन घरमा तुलसीको मोठ छ, त्यो घर एकदमै पवित्र हुन्छ, त्यहाँ कुनै रोगव्याधले सताउँदैन अनि त्यहाँ मृत्युदेव यमराज आउन सक्दैन’ भन्ने हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको विश्वास रहेको छ।
नेपाल र भारतमा अवस्थित हिन्दु मन्दिरको परिसरमा तुलसीको मोठ देख्न सकिन्छ । किनभने यसको पातलाई हिन्दु देव र देवीहरूलाई चढाउनको लागि पवित्र मानिन्छ-विशेष गरी ‘विष्णु भगवान’को लागि ।
आयुर्वेदमा पनि तुलसीको पातको ठूलो महत्व रहेको छ । आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साशास्त्रका अनुसार यसले रुघाखोकी, टाउको दुख्ने, टन्सिल हुने जस्ता समस्याबाट राहत दिन्छ । विज्ञानकै कुरा गर्दा पनि तुलसीको बोटले अन्य वृक्षले भन्दा बढि कार्बनडाइअक्साइड लिने र अक्सिजन फ्याँक्ने गर्दछ । त्यसैले नै घरको आँगनमा तुलसी रोप्नु धार्मिक र स्वास्थ्य पक्षबाट शुभ मानिन्छ ।
तर, सावधान! धेरैले तुलसीको पातको गलत प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । जान्नुहोस्, तुलसीको पातलाई के गर्नुहुँदैन- धार्मिक र वैज्ञानिक कारणः
१. कहिल्यै नचपाउनुहोस्
सुन्नुभएकै होला- ‘तुलसीको पात कहिल्यै पनि चपाउनुहुँदैन, पाप लाग्छ ।’
अब धार्मिक पक्षबाट हेर्ने हो भने, तुलसीलाई विष्णु भगवानको स्वरूप मानिन्छ र यसको पातलाई दाँतले चपाउनु विष्णु भगवानको अपमान गरेको हुन्छ ।
वैज्ञानिक पक्षबाट हेर्ने हो भने, तुलसीको पातमा एक प्रकारको रसायन हुन्छ जसले हाम्रो दाँतमा भएको क्याल्सियमलाई सोस्ने काम गर्छ । त्यसैले यसलाई चपाउनु एकदमै हानीकारक मानिन्छ ।
त्यसैले तुलसीको पात खानुपरेमा नचपाई पानीसँग निल्नु सबैभन्दा लाभदायी मानिन्छ र पाप पनि लाग्दैन ।
२. कहिल्यै पनि शिवलिङ्गमा नचढाउनुहोस्
हिन्दु धर्मका ग्रन्थअनुसार, शक्तिशाली असुर जालन्धरकी पत्नी ‘वृन्दा’को वास्तविक रूप तुलसी हो। अनि जबसम्म वृन्दाको पतिव्रत धर्म चोखो र शुद्ध रहिरहन्छ, तबसम्म जालन्धरलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन र अमर रहिरहन्छ ।a
एकचोटि शिवलाई हराउन भनेर जालन्धरले शिवसँग युद्ध गर्न जाँदा सबै देवताहरू जालन्धरको अमर शक्तिबाट हैरान हुन्छन् । त्यसैबेला विष्णु भगवानले जालझेल गरी वृन्दाको पतिव्रत धर्म लुटिदिन्छन् र शिवजीले जालन्धरलाई हराउन सफल हुन्छन् ।
विष्णुको यस्तो छलकपटबाट क्रोधित वृन्दाले विष्णुलाई तुलसी वृक्षको रूप लिनुपरोस् भनेर श्राप दिन्छिन् र आफ्नो पति जालन्धरको वध गरेको हुनाले शिवजीलाई कहिल्यै पनि तुलसीको पवित्र पात नचढोस् भनेर श्राप दिन्छिन् ।
त्यसकारण नै शिवलिङ्गमा तुलसीको पात चढाउनु अनर्थ मानिन्छ ।
३. यी दिनहरूमा कहिल्यै पनि तुलसीको पात नटिप्नुहोस्
किनभने, शिवजीले जालन्धरलाई हराएको दिन पनि आइतबार थियो, त्यस दिनमा एकादशी परेको थियो र साथै सूर्य ग्रहण पनि लागेको थियो । त्यसैले यी दिनहरूमा तुलसीको पात टिप्नु भनेको वृन्दाको सतिहरण गरेसरह हुने र पात टिप्ने व्यक्तिको जीवनमा कहिल्यै पनि शुभ-शान्ती नआउने विश्वास गरिन्छ ।
४. गणेश भगवानलाई पनि कहिल्यै नचढाउनुहोस्
जब युवती वृन्दा जङ्गलमा चाहार्दै थिइन्, तब उनले गणेश देवले ध्यान गरिरहेको देखिन्। गणेशको सुन्दरता र गहिरो ध्यानको प्रभावले गर्दा वृन्दा मोहित भइन् र तुरुन्तै गणेशसँग विवाह गर्ने प्रस्थाव राखिन् ।
आफू ब्रह्मकुमार भएको र त्यसैले गर्दा विवाह गर्न नहुने बताउँदै गणेशले वृन्दाको विवाह प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि वृन्दा क्रोधित भइन्। क्रोधमै अन्धि बनेर उनले गणेशलाई आफ्नो ब्रह्मकुमारको प्रतिज्ञा तोडेर विवाह गर्नुपरोस् भनेर श्राप दिइन् ।
उनको यस्तो तर्कहीन श्रापले गर्दा गणेश पनि क्रोधित भएर वृन्दालाई ‘चाँडै नै विवाह गर्नुपरोस्, त्यो पनि दैत्यसँग । त्यसपछि श्रापको कारण नश्वर संसारमा वृक्ष भएर जन्म लिनुपरोस्’ भनेर श्राप दिए ।
गणेशको क्रोध र श्रापले गर्दा वृन्दाले आफ्नो गल्ती महशुस गरी गणेशसँग क्षमा मागिन् । वृन्दाको क्षमा याचना देखि प्रसन्न भई गणेश भगवानले उनको श्रापलाई कम गरीदिए – ‘नश्वर संसारमा जुन वृक्ष भएर जन्म लिन्छौ, त्यस वृक्ष एकदमै पवित्र होस् । तर मेरो पूजा गर्दा तिम्रो पात चढाउन नहोस् ।’
त्यसकारण नै गणेशको पूजा गर्दा तुलसीको पात चढाउनु अशुभ मानिन्छ र पूजाको फल पनि नपाइने हिन्दु धर्ममा विश्वास गरिन्छ ।
५. कहिल्यै पनि घरभित्र तुलसी नरोप्नुहोस्
विभिन्न धर्मग्रन्थका अनुसार, जालन्धरको मृत्युपश्चात विष्णुले वृन्दालाई आफ्नी शखीको रूपमा मानेका थिए । अनि वृन्दाले आफूलाई पनि उनकै साथ लैजान विष्णुसँग आग्रह पनि गरिन् । तर विष्णुले अस्वीकार गरे र भने – “मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी हुन् तर मेरो तिमी सदा मेरो हृदयमा हुनेछौ”
त्यसपछि वृन्दाले विष्णुको घरबाहिर आँगनमा बस्न पाउने आग्रह गरिन्, जुनलाई विष्णुले स्वीकार गरे। त्यसैले नै विष्णु र वृन्दारूपी तुलसीको मोठलाई घरबाहिर राख्नुपर्ने, घरभित्र राख्दा अशुभ हुने विश्वास गरिन्छ ।
तर कतिपय ठाउँमा मानिसहरूले आफ्नो सहजताको लागि तुलसीको मोठलाई घरको छतमा राखेको पाइन्छ। घरको छतलाई पनि घरभित्रकै परिसर मानिने हुनाले यसो गर्न हुँदैन । जहिले पनि तुलसीको मोठलाई घरबाहिर नै राख्नुपर्दछ ।
जन्डिसको उपचारका लागी पनि :
जन्डिस भएपछि कलेजो विग्रने र भाइरल हेपटाइटिस हुने गर्छ जसको उपचार निकै कठिन मानिन्छ । मलेरिया, हेपटाइटिस ए लगायतका रोगका कारण पनि जन्डिस हुने गर्छ । प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गर्न सकेमा कतिपय अवस्थामा जन्डिसलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । जन्डिस उपचारका केही प्रमाणित घरेलु उपाय यस्ता छन् ।
कागतीमा भएको रोग प्रतिरोधी तत्वले पनि जन्डिस उपचारमा सहायक सिद्ध हुन सक्छ । कागतीले रोकिएका आन्द्राका नलिहरुलाई खुलाइदिनुका साथै रोगीले खाएको खानेकुरा पचाउन पनि मद्दत गर्छ । यसरी बनाएर खाएको कागती पानीले कलेजोको कोषलाई हानी हुनबाट बचाउछ ।
घ्युकुमारीको केही पात टिपेर भित्रको तरल पर्दाथलाई कालो नून र अदुवासँग मिलाउनुहोस् । १० दिनसम्म खाली पेट खानुहोस् । बिस्तारै सुधार आउछ ।
एक गिलास महि लिनुहोस र यसमा केही कालो मरिच हाल्नुहोस् । राम्रोसँग घोल्नुहोस र दिनमा कम्तिमा तीन पटक पिउनुहोस् ।
दिनमा कम्तिमा पनि दुई पटक खानुहोस् । जण्डिस उपचारमा यो विधि आयुर्बेदमा पनि निकै प्रयोग भएको पाइन्छ ।
एक चिम्टिी नुन र मरिचको धुलो मिसाएको एक गिलास गोलभेडाको जुस विहान खाली पेट खानुहोस् ।
मुलाको पातले भोक लगाउने र आन्द्राको कार्यलाई सुचारु गराउँछ । मुलाको पातको जुस बनाई फिल्टर गरी खाँदा उत्तम हुन्छ ।
एक चम्चा महलाई एक चिया चम्चा मेवाको पातको पेस्टमा मिसाएर खानुहोस् । यसको सेवन जन्डिसका लागि निकै प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।
उखुमा भएको तत्वहरुले जन्डिसका रोगीले खाएको खानेकुरा वा जुस पचाउन सहयोग गर्नुका साथै कलेजोलाई उचित रुपमा काम गर्न सहयोग पुर्याई बिरामीलाई जन्डिसबाट मुक्त हुन सहयोग पुयाउछ ।
१० देखि १५ ओटा तुलसीका पात लिनुहोस् र यसको लेप बनाउनुहोस् । यसमा यसमा आधा गिलास ताजा जुस मिसाउनुहोस् । दुई देखि तीन साताभित्रै जन्डिसबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
एक मुठी जौलाई तीन लिटर पानीमा मिसाएर सानो आगोमा लामो समयसम्म तताउनुहोस् । यसरी धेरैबेरसम्म तताएको पानीलाई बारम्बार पिउनुहोस । उमालेको जौ पानी जन्डिस उपचारका लागि सही तरिका सक्छ ।
Don't Miss it कसरी छुटकारा पाउने पेट फुल्ने वा डम्म हुने समस्याबाट ? थाहा पाउनुहोस्
Up Next के तपाईको निन्द्रामा बोल्ने बानी छ ? त्यसो हो भने तपाईले यस्ता कुराहरुलाई आजैबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ
चटनीका औषधीय गुण, यस्ता छन्
प्याज र लसुनको चटनी लसुन एक शक्तिशाली प्राकृतिक एन्टिबायोटिक, एन्टिफंगल र एन्टिब्याक्टेरियल हर्ब हो । यसले उमेरअनुसार हुने असामान्य शारीरिक…
के तपाई आलोचनाबाट डराउनुहुन्छ ? आलोचनालाई यसरी ह्यान्डल गर्नुहोस्
मानिसले आलोचनाको डरलेआफुलाई गर्न मन लागेको काम पनि हिच्किचाउछ भने उत्साही रुपले काम गरिरहेको व्यक्ति आलोचनाले हतोत्साही हुन सक्छ ।…
साङ्ग्ला, जुम्रा, मुसा भगाउन देखि सर्प को बिष मार्न सम्म अत्यन्तै उपयोगी तेजपत्ता जान्नुहोस्
तेजपत्ता पनि घरेलु औषधीले भरिपुर्ण गुण भएको पात हो । यसले माछा, मासुका परिकार स्वादिलो बनाउनको लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ ।…
जीवन सम्बन्धि प्रसिद्द तथा सत्य वचनहरू – यि कुरालाइ कहिल्यै बवेस्ता नगर्नुहाेस
हाम्राे जीवनमा हामीले नजानेका र जानेर पनि व्यवहारमा लागु गर्न नसकेका कुराहरू थुप्रै छन । संसार त्यस्ता धेरै कुराहरू छन…
करियरको सफलताको लागि १० प्रेरक भनाइहरू
आजको संसारलाई प्रतिष्पर्धात्मक युग मानिन्छ र यहाँ पहिलो हुनको लागि होडबाजी चलिरहन्छ । यही होडबाजिले गर्दा निराशाहरु पनि उत्पन्न भएका…
शरिरलाइ सधैभरी स्वास्थ राख्नका लागी तुलसीको पात निकै फाइदाजनक हुन्छ
शरीरा आलश्य भैरहेको छ भने वा ज्वरो आउन लागेको छ भने पुदीनाको रस र तुलसीको रस बराबर मात्रामा मिलाएर त्यसमा…